Ọmenala ndị Igbo Archives - Ọmọ Oòduà
Home / Art / Ọmenala ndị Igbo
chucks Comments Off on Amotekun Effect Ripples as Igbo Group Gives 90 Days To South East Governors To Launch Security Outfit
The National Working Committee (NWC) of the Igbo National Council (INC), an Igbo socio-cultural group has issued a 90 days ultimatum to the governors of the southeast zone to inaugurate their very own regional outfit. Reading a communiqué following a ...
chucks Comments Off on Igbo Political Leaders And Their Past Misadventures Resulting In Current National Political Problems
chucks Comments Off on Otu nwata akwukwo nwanyi no nag bata ikpeazu ya na Mahadum di n’imo Steeti dara n’ike ma buru onye nwuru anwu!
Otu nwaagbogho no na ngalaba ikpeazu ya na Mahadum di na Imo Steeti aha ya bu Ogamba Angel Chiamaka, ka ekwuru na O dara n’ike ma nwukwazia. Nke a mere obuna mgbe ogbachitechere olu ikpeazu ya na Mahadum nke ndi ...
chucks Comments Off on Maggi Anwuli Oputa: Nwa nwanyi nwa nwoke Charly onye bu Onye newulite anu aru ma burukwa nne nke umu asaa.
Maggy Anwuli Oputa bu nne nke umu asaa mana anuaru ya adokachala, O bu onye newulite anuaru. Nna ya Charly Nwoke, Onye bu nna Ogbe, Kere foto Maggy na asomumpi nke ndi newulite anuaru we dee Ihe a: Adaeze ...
AbubakarMuhd Comments Off on Ọkpụkpụ !!!
Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ. Igbo bụ Igbo tụrụ ilu sị na iwe nwa nne na nwa nne anaghị eru n’ọkpụkpụ,kpọm kwem! Ọ dịghị onye amaghị na ahụ anyị bụ ọkpụkpụ mere ka osie ike ije ije na ịkwụ ọtọ, ...
Ego Na Achi Uwa
chucks Comments Off on Ego Na Achi Uwa
EGO NA ACHI UWA – Money rules the world. Medium: Natural soil and leeli on canvass